Alexis Sanchez oo inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Arsenal ku xiray inay lacagtaan siiyaan isbuucii! – kulaaad.com
Alexis Sanchez oo inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Arsenal ku xiray inay lacagtaan siiyaan isbuucii!
Alexis Sanchez ayaa la soo warinayaa inuu u sheegay kooxdiisa Arsenal in mushaarkiisa todobaadkii laga dhigo £400,000 kun oo gini haddii ay doonayaan inuu ku sii nagaado garoonka Emirates.
Xiddiga xulka qaranka Chile ayaa la la xiriirinayey inuu lacag qiime sare uga tagi doono kooxda ka dhisan Woqooyiga London, isla markaana uu hakad geliyey inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda.
Sida uu warinayo Wargeyska The Mirror, kooxda Arsenal dalabkii ay u gudbisay ee ugu danbeeyay ayuu Sanchez isbuucii ku qaadan karaa £275,000 kun oo gini, laakiin qandaraaskiisa ayaa dhacaya xilli ciyaareedka soo socda, weeraryahanka ayaana diyaar u ah inuu helo dalab wanaagsan haddii uu Gunners sii joogayo iyo haddii kaleba.
Wararka ayaa sidoo kale soo jeedinaya in Manchester City aan loo tix gelinaynin inay qaataan Sanchez, maxaa yeelay Gunners ma doonayso inay hubkeeda ugu deeqdo koox ay isku horyaal ka ciyaaraan, halka Bayern Munich ay horay u sheegay inay isaga baxday doonista xiddigan.
Dhinaca kale Arbacadii la soo dhaafay kooxda Arsenal ayaa bangiga u jabisay Alexandre Lacazette oo ay ka soo qaateen Lyon, waxaana uu noqday xiddiga ugu qaalisan ee ay la soo wareegtay Gunners taariikhdeeda.
kulaaad.com © 2017. All Rights Reserved.